बजेटपछि मात्रै १ लाखले लिए प्यान, कसरी लिन सकिन्छ प्यान ? – Clickmandu
बजेटपछि मात्रै १ लाखले लिए प्यान, कसरी लिन सकिन्छ प्यान ?
क्लिकमान्डु २०७६ साउन ६ गते ११:२१ मा प्रकाशित
काठमाडौं । सरकारले यही साउन १ गतेदेखि तलब तथा अन्य सुविधा लिन अनिवार्य रुपमा स्थायी लेखा नम्बर(प्यान) अनिवार्य गरेपछि पछिल्लो ४५ दिनमा मात्रै १ लाख बढीले प्यान लिएका छन् ।
१ हजार रुपैयाँ भन्दा माथिको भुक्तानीमा अनिवार्य प्यान नम्बर लागू गरिएको छ । सोही योजना अनुसार नै प्यान लिनेको संख्यामा बढोत्तरी भएको हो ।
गत जेठ १५ गते सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । संघीइ संसदमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले प्यान अनिवार्य गरेका थिए । लेखा प्रणाली तथा भुक्तानी प्रक्रियालाई थप पारदर्शी बनाउनका लागि प्यान अनिवार्य गरिएको सरकारको भनाइ छ ।
आन्तरिक राजश्व विभागका अनुसार हालसम्म करिब २२ लाख बढीले प्यान लिइसकेका छन् । पछिल्लो ४५ दिनमा मात्रै १ लाख प्यान थपिनुलाई विभागले सकारात्मक भन्दै त्यस्तो नम्बर नलिएकालाई समेत तत्काल लिन आग्रह समेत गरेको छ ।
विभागका अनुसार दैनिक २ हजार २२२ जनाले प्यान लिएका छन् । सरकारी तथा गैरसकारी संस्था, निजी संस्थामा कार्यरत सबैले अनिवार्य रुपमा प्यान लिनुपर्ने व्यवस्था गरेपछि चासो समेत बढेको हो ।
सरकारले एक व्यक्ति इक स्थायी लेखा नम्बर भन्ने नीति लिएको छ । सोही नीतिका आधारमा प्यान लिनेको संख्यामा बाढोत्तरी भएको हो ।
कसरी लिन सकिन्छ प्यान
विभागले आफ्नो बेवसाइटमा रहेको ट्याक्सपेयर पोर्टलमा गएर अनलाइन फारम भर्न सक्छन् । वा आफूलाई पायक पर्ने आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा गएर समेत फराम भरी प्यान लिन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । यस्तै करदाता सेवा कार्यालयमा समेत प्यान लिने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारी कार्यालय, संघ संस्था, विद्यालय, विश्वविद्यालय, अस्पताल, गैरसरकार िसंस्थालगायत निजी क्षेत्रका संघ संसथा, उद्योग व्यवसाय एवम् व्यवसायिक फर्मले आफ्ना कर्मचारी एवम् कामदारलार्य अनिवार्य रुपमा प्यान लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
एकमुष्ठ रुपमा फर्म भरी आएमा वा धेरै कर्मचारी भए सम्बन्धित कार्यालयले पनि आन्तरिक राजश्व्का कर्मचारी बोलाई प्यान लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
नाडा अध्यक्षमा कृष्णप्रसाद दुलाल निर्विरोध, अटोमोबाइल्स क्षेत्रको मनोबल बढाउन काम गर्ने
सामाजिक सुरक्षामा जान बैंकिङ क्षेत्रका कर्मचारी अनिच्छुक, जबरजस्ती भए आन्दोलनमा जाने
‘बुलिस ट्रेण्ड’मा लाग्दै निर्धन उत्थानको सेयर, दीर्घकालिन लगानीकर्ताले होल्ड गर्दा फाइदा